लघुकथा Archives | साहित्यपोस्ट
१५ भाद्र २०७८ ०९:०१ 0
राम द्विविधामा पऱ्यो, “आखिर ईश्वर हुन्छन् कि हुँदैनन् ? जान्नै नसकिने । छन् भनौँ भने शिवलाई कसले देख्यो ? छैनन् भनौँ भने यो सृष्टि धानेको कसले छ त ?” उसलाई विचारको हुन्डरीले उडाएरै छाड्यो । मन्दिर जाँदै गर्दा बाटामा पण्डित श्रीकृष्ण…
लघुकथा: सरकार कस्को ?
१८ जेष्ठ २०७८ १५:०१ 0
बजेट सार्वजनिक हुने दिन आउँदैदेखि आशामुखी कर्मचारीहरू तलब वृद्धि हुने कुरामा आशावादी थिए । सबैलाई खुसी पार्ने प्रयास गर्ने पटकपटकको सरकारी आश्वासनले पनि उनीहरूलाई झनै आशावादी बनाएको थियो । बजेट सार्वजनिक हुने दिन कर्मचारीहरू बडो…
११ जेष्ठ २०७८ ११:०१ 0
ऊ सानैदेखि गुन्डा शैलीको अनुशरण गरेर आफ्नो अमिट छाप समाजमा छोड्दै हिँडिरहेको थियो । समाजमा कहिले फूललाई निमोठी दिन्थ्यो त कहिले काँडाहरू बाटाभरि छरिदिन्थ्यो । उसलाई देख्ने बित्तिकै मुटुहरू थर्कमान हुन्थे । समाजमा…
दीपेश मूर्ति पन्त	 ४ जेष्ठ २०७८ ०८:०१ 0
श्रीकृष्ण शर्मा	 २५ फाल्गुन २०७७ १४:०१ 0
उसलाई देखेको पहिलो दिनमै म चुम्बकले तानेको फलामझैँ आकर्षित भएँ । माया एकतर्फी हुनै सक्दैन । सिर्जिता पनि अलिअलि आकर्षित नभएकी त कहाँ हो र ? मनलाई जबरजस्ती दबाउने असफल प्रयास मात्र गरेकी हो । सिर्जिता मामाघर बसेर एघारमा पढ्दै थिइन् । एक…
११ फाल्गुन २०७७ १७:०४ 0
‘शान्ति सुरक्षा पटक्कै छैन ।’ एउटाले भन्यो । ‘प्रत्येक दिन केही न केही घटना घटेका घट्यै छन्’ आर्कोले थप्यो । ‘यी ल हेर आज त झन यत्रो जेनेरेटर नै चोरी भएछ’ झन अर्कोले थप्यो । ‘गए राती मोटर साइकल चोरिएको प्रहरीलाई थाहा छ तर प्रहरीले पनि…
लघुकथा शृङ्खलाको भाग ४
२७ आश्विन २०७७ १६:०० 0
मंगलबार, साहित्यपाेस्टका पाठकहरूका लागि आख्यानकाे स्वाद लिने दिन । आख्यानकाे एउटा पाटाे लघुकथा पनि हाे । यसै क्रममा हामीले नेपाली लघुकथाको इतिहास र चर्चित लघुकथा एकसाथ पस्कने निधो गरेका छौँ । यो जिम्मेवारी उठाउनु भएको छ, साहित्यकार दीपक…